न्याय परिषद् सदस्यका लागि यस्तो खेलखण्ड, कस्तो व्यक्ति सिफारिस गर्ने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
न्याय परिषद् सदस्यका लागि यस्तो खेलखण्ड, कस्तो व्यक्ति सिफारिस गर्ने ?
२०७७ कार्तिक १, शनिबार ०८:१०:००
काठमाडाैँ-न्यायाधीशहरुको पनि न्यायाधीश मानिने न्याय परिषद सदस्य कस्तो बनाउने भन्ने विषयले यतिखेर नेपाल बार एसोसिएनदेखि न्याय क्षेत्र तातेको छ ।
दसैँको मुखैमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र केही न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा बारका तर्फबाट प्रतिनिधि नहुँदासम्म नियुक्ति नगर्न दबाब आएपछि राणा पछि हटे ।
अब नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा न्याय परिषद सदस्य सिफारिस नगरेसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने पक्का भएको छ ।
अदालतहरु आजबाट पूर्णिमासम्म बन्द भइसकेकाले पनि नियुक्तिका काम प्रभावित हुनेछन् । न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाइ पनि हुनपर्छ । संसदीय समितिका बैठकहरु पनि यसबीचमा बस्न कठिन छ ।
यी सारा गतिविधि ठप्प हुँदा पनि नेपाल बार र न्याय क्षेत्र न्याय परिषदको नयाँ सदस्यलाई लिएर भित्रभित्रै तातेको छ । विगतका सदस्यहरुले बारको नाममा निजी स्वार्थमा मात्र काम गरेकाले पनि अब त्यो इतिहास दोहोरिन दिन नहुने आवाज जोडदार रुपमा उठेको छ ।
विगतमा रामप्रसाद सिटौला, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगाना विवादमुक्त हुन सकेनन् । अरु न्यायपरिषद सदस्यले पनि सानोतिनो लोभ र मोहमा परेर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र नियमनमा निष्पक्षता एवं व्यावसायिकता कायम गर्न सकेनन् ।
कतिपयले आफ्नो न्यायपरिषद सदस्यको पद सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने भर्याङ बनाउने प्रयास गरे । जबकि, सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता भएको व्यक्ति न्यायपरिषद सदस्य बन्ने र एकपटक यस्तो नियुक्ति पाएको व्यक्ति पुनः अर्को कुनै पदमा नियुक्त हुन नसक्ने संविधानमै लेखिएको छ ।
अझ न्यायपरिषद सदस्य भनेको न्यायाधीशहरुको पनि न्यायाधीश हो । न्यायाधीशहरुको प्रहरी पनि हो । यति ठूलो पदलाई बिक्रीमा राखेर अर्को पदका पछाडि दौडिने रोगबाट मुक्त राख्न पनि बारले अबको सिफारिसमा विशेष ध्यान राख्नैपर्छ ।
न्यायपरिषद सदस्यले न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता एवं स्वच्छन्दतामा लगाम लगाउने पनि हो । तर, यहाँ न्यायपरिषद सदस्य या त पार्टीका कार्यकर्ता छन्, या त प्रधानन्यायाधीशका कार्यकर्ता भएका छन् ।
हालका वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद सदस्य दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीशका कार्यकर्ता बनेका छन् । उनले आफ्नै हैसियतलाई समेत ख्याल नगरी प्रधानन्यायाधीशका गैरव्यावसायिक निर्णयमा साथ दिएका छन् ।
कानुन व्यवसायको कुनै अनुभवै नभएका डालकुमार खड्का र उज्जवल शुक्लालाई आफ्नो कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन पाएका कार्की अहिले पनि आफ्नो गोजीबाट केहीलाई सरुवा गर्न पाएर दंग परेका छन् ।
जबकि, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतको पद हो । इजलासमा यी दुवै जनाको बराबर भोट हुन्छ । न्यायपरिषदम पनि उसको त्यही हैसियत हुन्छ । तर, यो सारा भुलेर सानातिना लोभमा परेर त्वं शरणम् गरेका कार्कीले न्यायपरिषदलाई प्रधानन्यायाधीशको एउटा सचिवालयजस्तो बनाइदिएका छन् ।
बारबाट आउने सदस्य अब कम्तीमा पार्टीको कार्यकर्ता नभएको, आफ्नो व्यावसायिक योग्यताका साथ अडान पनि भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत लगाम कस्ने सदस्य माननिय सदस्य लक्ष्मी बहादुर निराला जस्ता सदस्यकाे न्यायपरिषदमा आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कसरत, शक्ति हेर्ने कि साख ?
सिंहदरबारमा सम्धीतन्त्र, अदालतमा ज्वाइँतन्त्र-१
किनभने, एकाध सरुवा र भागबण्डामा न्यायपरिषद सदस्यलाई घाँस हालेर प्रधानन्यायाधीशले मनपरि निर्णय गर्ने प्रथामा ब्रेक लगाउनु आवश्यक छ । यसो गरिएन भने कनिष्ठ व्यक्तिहरु हैसियतभन्दा बढी पाउँदै जानेछन् । योग्य, इमानदार अनि वरिष्ठहरुको मानमर्दन हुँदै जानेछ ।
यसै पनि अहिले राम्रा मान्छेहरु न्यायाधीश बन्ने भनेपछि नाक खुम्च्याउन थालिसकेका छन् । तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा, राणाले न्यायको रक्षाका निम्ति ज्यानको बाजी लगाएका इमानदार, योग्य अनि वरिष्ठ न्यायाधीशको मानमर्दन गरेका थिए ।
विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काँध चढेर एकैपटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका नहकुल सुवेदीलाई राणाले समय नपुग्दै पाटन अदालत ल्याएर आफ्नै ज्वाइँजस्तो बनाएर राखेका छन् । जबकि, सुवेदी न्यायाधीश बन्ने योग्यताका होइनन् भनेर दीपकराज जोशीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
दीपकराज जोशीबराबरको हैसियत समेत अहिलेका न्यायपरिषद सदस्यहरुमा देखिँदैन । विगतमा मीनबहादुर रायमाझी, भैरवप्रसाद लम्साल जस्ता न्यायाधीशहरुले न्यायपरिषद सदस्य हुँदा प्रधानन्यायाधीशका कतिपय गलत चाहना रोकिदिएका थिए ।
बाह्य दबाबलाई समेत उनीहरुले परास्त गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना र आफूनिकटका व्यक्तिहरुको कमजोरी छोप्न खोज्दा त्यसलाई असफल बनाएका थिए ।
तर, अहिले न्यायाधीश हुन् वा वकिल, जुन क्षेत्रबाट गए पनि प्रधानन्यायाधीशका वफादार कार्यकर्ता बनेर न्यायपरिषद सदस्यहरु प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । कम्तीमा अबको सदस्य सानोतिनो लोभ र प्रलोभनमा आफ्नो हैसियत नै प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पने खालको नहोस् ।